हाम्राे पिपलबाेट » महाधिवेशनमा सभापति देउवाको यस्तो प्यानल, को–को बन्दैछन् उम्मेदवार ? महाधिवेशनमा सभापति देउवाको यस्तो प्यानल, को–को बन्दैछन् उम्मेदवार ? – हाम्राे पिपलबाेट
महाधिवेशनमा सभापति देउवाको यस्तो प्यानल, को–को बन्दैछन् उम्मेदवार ?
नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्यानल बनाउन हिसाबकिताब सुरु गरेका छन् ।
आगामी भदौ महिनामा हुने गरी तोकिएको महाधिवेशनमा देउवाले सभापति पदमा लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
देउवाले हिसाबकिताब गरेर आफू सभापतिमा जित्ने पक्का गर्न अरुलाई पदाधिकारीमा प्यानलभित्र समेट्ने भएका छन् । देउवाले यसपालि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेतालाई तानेर आफ्नो प्यानलमा उम्मेदवार नबनाउने मनस्थिति बनाएका निकट स्रोतले जनाएको छ । गत महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा अर्जुननरसिंह केसीलाई उम्मेदवार बनाउँदा सफलता हात नलागेको घटनाबाट देउवाले शिक्षा लिने भएका छन् ।
देउवाको प्यानलमा विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशशरण महत, एनपी साउँद, बालकृष्ण खाँण, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विश्वप्रकाश शर्मा, बीरबहादुर बलायर, मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताहरू पदाधिकारीका आकांक्षी देखिएका छन् । तर यी नेताहरूमध्ये धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन सक्नेहरूलाई देउवाले आफ्नो प्यानलमा पदाधिकारीमा मौका दिने छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भइसकेपछि देउवाले हिसाबकिताब गरेर पदाधिकारीको टुंगो लगाउने छन् ।
तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट पार्टी प्रवेश गर्दै उपसभापति बनेका विजय गच्छदारलाई फेरि उपसभापतिमै उम्मेदवार बनाइने देखिएको छ । गच्छदारसँगै कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको ठूलो समूह रहेको र त्यो पक्षको सहयोगले सभापति जित्न सजिलो हुने देउवाको आकलन छ ।
यसपालि महाधिवेशनमा २ जना उपभासपतिको चुनाव हुने भएकाले अर्काे उपसभापतिमा देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई रोज्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । उपसभापतिका आकांक्षी गोपालमान श्रेष्ठलाई भने देउवाले महत्त्व नदिने स्रोतको दाबी रहेको छ ।
महामन्त्री पदमा देउवा पक्षमा बालकृष्ण खाँण, एनपी सावद, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताहरू आकांक्षी रहेका छन् । यीमध्ये बालकृष्ण खाँण पक्का तथा एनपी सावद र रमेश लेखकमध्ये एक जना महामन्त्रीका उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । नेता प्रकाशशरण महतलाई पुनः सहमहामन्त्रीमै दोहोर्‍याउने तयारी गरिएको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ ।
युवापंक्ति लोकप्रिय मानिएका विश्वप्रकाश शर्माको प्रभावले सभापति पदमा समेत देउवालाई मत आउने सम्भावना रहेको अवस्थामा शर्मा समेत महामन्त्री उम्मेदवार बन्नसक्ने स्रोतले जनाएको छ । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पार्टीमा उम्मेदवार नबनाई सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर व्यवस्थापन गरिने स्रोतको दाबी छ ।
देउवा पक्षकै नेता तथा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले सभापतिमा लड्ने तयारी गरेपछि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि समेत देउवाले हिसाबकिताब गर्न थालेका छन् । पार्टी प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदार र सुनिल थापालाई आफ्नो पक्षमा पारेर बलियो हुने देउवाको योजना रहेको छ ।
यसबीच कांग्रेस प्रवेश गरेका कैलालीका मोहनसिंह राठौर, डडेल्धुराका जनकराज कलौनी, सर्लाहीका जंगीलाल राय, लमजुङका दयाराम पाण्डे, डोल्पाका कर्णबहादुर बुढा, सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठ, कपिलवस्तु्का अभिशेषप्रताप शाह, स्याङ्जाका भूमिबहादुर (विश्व) गुरुङ लगायतलाई साथमा लिएर मत बढाउन सकिने देउवाको रणनीति रहेको छ । यी नवप्रवेशीलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिसकेका छन् ।
२१ असार २०७८ मा प्रकाशित